Free Online FLV ka MOV Ntụgharị
> Resource> Video> Top 5 Free Online FLV ka MOV Ntụgharị
Top 5 Free Online FLV ka MOV Ntụgharị
Mgbe ụfọdụ i nwere na-achọ a ngwá ọrụ iji tọghata FLV ka MOV. Isiokwu a ga-agwa gị 5 kasị mma na free online video converters nke aka gị mfe tọghata FLV ka MOV online. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ a ọkachamara na elu ndị ọzọ video Ntụgharị, i nwere ike ịgbalị desktọọpụ video Ntụgharị atụ aro ya. Dị na-agụ n'okpuru iji nweta ozi ndị ọzọ.
Free online video Ntụgharị
Wondershare Video Ntụgharị
Benderconverter bụ oké ngwá ọrụ na ị gaghị na-atụ uche. Ọ na-akwado converting video, ọdịyo na oyiyi site na-ebugote isi iyi faịlụ site na PC. Iji tọghata FLV ka MOV, ị nwere ike họrọ mmepụta format dị ka video maka ekwentị n'okpuru video udi. Wee pịa "tọghata" button na-amalite akakabarede usoro. Otu ihe dị mkpa ka ị mara na gị isi iyi faịlụ kwesịrị erughị 100 MB.
Na Convert2mp3, i nwere ike dị tọghata a video site na itinye video url si YouTube, Dailymotion wdg Ọzọkwa, a online FLV ka MOV Ntụgharị-ahapụ gị tọghata site n'inyocha onye na-ese, song aha ma ọ bụ video aha, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na-echeta video ma ọ bụ ọdịyo URL. Mmepụta format nwere ike ịbụ 3GP, M4A, AAC, FLAC, OGG, WMA, MP4, AVI, WMV.
Ọ bụrụ na gị video faịlụ bụ erughị 25 MB, ị nwere ike na-agbalị a online video Ntụgharị. -Ewere na ndị na-akwado video size bụ obere, na Ntụgharị-arụ ọrụ na elu na-agba. N'ihi na mmepụta video formats, ọ bụghị nanị na-akwado converting faịlụ ka MOV, ma ndị ọzọ na formats, gụnyere FLV, AVI, MOV, mpg, VOB, MP4, WMV, RM, DivX.
Apowersoft kwesịrị ka ị rụnye mgbakwunye a nkwụnye na iji rụọ ọrụ ngwá ọrụ. Mgbe nkwụnye na a mere, ị pụrụ ịnụ ụtọ ya dị ike na ọrụ. Nke a online FLV ka MOV Ntụgharị akwado converting ọtụtụ formats, gụnyere MP4, AVI, MOV na WMV. Ọzọkwa ọ na-ahapụ gị ịtọ video na ọdịyo ntọala, ihe atụ ndị mkpebi, bitrate na etiti ọnụego.
Wondershare Video Ntụgharị bụ a desktọọpụ Ntụgharị. Ọ atọghata video ka QuickTime MOV, Ekwentị 3GP, na wdg Ọ na-akwado converting, edezi, na-ere ọkụ na nbudata na video. N'ihi na converting video, ọ na-akwado ihe ọ video formats. N'ihi na edezi videos, ị nwere ike ewepụtụ, tinye ndepụta okwu ma tinye mmetụta. Jiri ya tụnyere ndị ọzọ converters, ọ na-atọghata 30x ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla ọzọ converters, na e nweghị file size-agaghị emeli.
Olee otú iji tọghata FLV ka M4V
Olee otú iji tọghata FLV ka MKV
Top 4k Content Guide maka Ị
Olee otú Ọkụ HD Videos ka DVD
Olee otú Download SchoolTube Video na One Click
Olee otú iji tọghata M4V faịlụ na Windows / Mac